Usoro Fans usoro
Axial Fans Na Ngwa
Kedu ihe kpatara maka nwayọ mmalite nke ụdị ụdị ， Otu esi edozi ngwa ngwa nke ụdị ụdị fan
site ha na 21-07-07
N'oge ọkọchị, a ga-eji ụdị ngwa eletrik niile. Na mgbakwunye na ndị na-ejikarị ikuku oyi, Fans bụkwa ezigbo nhọrọ. Costgwọ ọnụahịa dị oke elu. Agbanyeghị nkasi obi nwere ike ịdị obere, ọ dị mfe iji ma dịkwa ọnụ ala, yana ọ dị mfe iji ...
Mist Fan Ga-enye Ihe Ọzọ Ka Mma Nye Igwe Igwe Ikuku?
Enwere ọtụtụ ụzọ iji dị jụụ gburugburu anyị ma belata okpomọkụ dị ọkụ. Ebe dị ọkụ na-ebelata ike ike nke ahụ anyị ma gbochie anyị itinye uche zuru oke na ọrụ ọ bụla. Ọ na-adị anyị ezigbo mfe mgbe okpomọkụ dị elu n'ihi na ntọhapụ nke ọsụsọ na ahụ anyị ...
The ụkpụrụ ọrụ nke cylindrical ikuku mmiri
Workingkpụrụ ọrụ nke onye na-afụ ọkụ na-arụ ọrụ principlekpụrụ ọrụ nke ikuku ikuku dị ka nke ikuku ikuku, ma usoro mkpakọ nke ikuku na-arụkarị site na ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ (ma ọ bụ ọtụtụ ọkwa action n'okpuru ihe c ...
Utdị uru ahụ metụtara nrụrụ aka na-eme ka aka rụọ
Centrifugal humidifier teknụzụ, tinyere mpụta shei, kọwara na mpụta shei nke esịtidem Ntọala bụ nke foogu, na alụlụụ efere enịm n'èzí nke chute, kọwara na ihe nkwado mmanya na ala nke elu casing njikọ, na enịm ala. ...
Chọrọ ịma ka esi arụ ọrụ humidifik centrifugal?
Kpụrụ nke humidifier centrifugal bụ na efere okpokoro nke centrifugal na-agba ọsọ ọsọ ọsọ n'okpuru ọrụ nke moto ahụ, a na-atụpụkwa mmiri ahụ na mpempe akwụkwọ atomizing, a na-agbanye mmiri pọmpụ n'ime 5-10 microns nke ihe ntanetị na mgbe ahụ pụọ. Mgbe blo ...
HVAC nke Arenas Discovery Hospital na igwe ihe nkiri na-emeghere ndị Fans
Mgbe Phoenix Suns kwupụtara na 2019 na ha ga-emefu $ 230 nde iji mezigharịa ebe egwuregwu ahụ, ndị na-elekọta mmadụ 1,500 gbara mmadụ gburugburu anaghị atụ anya ịmaliteghachi. Agbanyeghị, mgbe ndị bịara na Febụwarị bịanyere aka na ọnụ ụzọ mbadamba nke pavilion ahụ na February 11 ọnwa mgbe ha hapụrụ ebe ahụ, ...
Mgbe Phoenix Suns kwupụtara na 2019 na ha ga-emefu $ 230 nde iji mezigharịa ebe egwuregwu ahụ, ndị na-elekọta mmadụ 1,500 gbara mmadụ gburugburu anaghị atụ anya ịmaliteghachi. Otú ọ dị, mgbe ndị bịara na February debanyere aha site n'ọnụ ụzọ e si edegharị aha nke pavilion ahụ na February 11 ọnwa ...
Xiaomi weputara obere DOCO Ultrasonic Dry Misting Fan
Xiaomi amalitela onye ofufe aka na-ebugharị nke na-agbakwa okpukpu abụọ dị ka humidifier. The DOCO Ultrasonic Dry Misting Fan dị ka onye na-agbanye aka mgbe niile mana ọ na-abịa na njirimara na-enweghị isi. Onye ofufe ahụ na-eji moto brushless DC nwere ụda mkpọtụ dị ala, ike ọkụ dị ala ma ọ naghị ekpo ọkụ ọbụlagodi na ...
Kedụ ka ikuku ofufe ikuku na-esi ebute alụlụ
Igwe ikuku ikuku, centrifugal gụnyere karama nchekwa, ihe nkwado, moto na agụba ọkụ; A na-enye karama nchekwa mmiri ahụ na mmiri ịgba, a na-agwa isi mmiri ahụ n'ime karama mmiri nchekwa ahụ site na ọkpọ mmiri na-agba mmiri, a na-enye isi ịgba na isi ịgba na aka ...
Ka eme ka nche anwụ ụdị liquefied gas okpomọkụ
N'oge oyi, ọ bụ uche onye ọ bụla ịme akwụ nke ha ọkụ ma dị mma. A usoro nke anwansi kpo oku ngwaọrụ pụta na nri oge, ma e nwekwara nchekwa ize ndụ, otú iji n'enweghị nsogbu bụ nnukwu nsogbu. Ka eme ka nche anwụ ụdị liquefied gas okpomọkụ. Akụkụ nke Gas ...
Igwe ihe eji eme ụlọ na Gas Na-eme Ka Ndụ Nwee Obi Utọ
Igwe oku gas na-enye ọkụ nwere ike ịbụ ihe mgbakwunye magburu onwe ya n'ụlọ gị na patio gị ma nwee ike inye okpomọkụ maka oge ọ bụla n'afọ. Igwe ikuku gas na-aba uru n'oge oyi, n'ihi na ọ na-enye mmiri ọkụ na ọkụ na patio, ebe ọ na-ajụkarị oyi n'èzí. Ndị a ...
Otu esi zere nrụgide ọkụ
site ha na 20-05-20
Adress:Mba 388 Linruo okporo ụzọ, Songmen Town, Wenling City, Zhejiang Province